Yoshimasa Hosoya – Cast – MMANIME
Katanagatari Overview The historical epic centers on Shichika Yasuri, the seventh generational head of the Kyotō-ryū school of martial arts in medieval Japan. He and his older sister Nanami live on an isolated island, untilamilitary advisor named Togame tells him of the final 12 swords forged byalegendary swordsmith. At Togame's bidding, Shichika embarks onajourney ...
Haikyu!! Hinataဆိုတဲ့ကောင်လေးက သူ့ရဲ့‌ပထမဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ အလယ်တန်းအဆင့်ပြိုင်ပွဲမှာ ဘုရင်ဆိုတဲ့သူကိုရှုံးသွားပါတာ် သူအထက်တန်းရောက်တဲ့အခါမှာ သူငယ်"ကအရမ်းကြိုက်ခဲ့တဲ့ဘောလီဘောသမားရှိတဲ့ကျောင်းကိုသွားပီးဘောလီဘောကလပ်၀င်ပါတယ် အဲ့ကလပ်မှာသူ့ကိုအရင်ကအနိုင်ယူခဲ့တဲ့ ဘုရင်ဆိုတဲ့သူနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတာတော့.... Season4Part2Episode 1
TMDb: 8.9/10 345 votes
Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans Roughly 300 years after the conclusion ofagreat conflict known as the Calamity War, the Earth Sphere has lost its previous governing structure, andanew system of government has createdanew world. Far away, seeds ofanew conflict are starting to form in the Mars Sphere. When private security company Chryse Guard Security (CGS) accepts ...
Natsume Yujin-cho Natsume ေဘာ္ဒါေပါင္းခ်ဴပ္စာအုပ္ Takashi Natsumeဆိုတဲ့ေကာင္ေလးဟာ ငယ္စဥ္ကတည္းက ဝိညာဥ္ေလာကကို ျမင္ႏိုင္တဲ့သူတစ္ေယာက္ပါ တစ္ေန႔တစ္ေန႔ဒီဝိညာဥ္ေတြနဲ႔ပဲ အလုပ္႐ႈပ္ေနၿပီး သူငယ္ခ်င္းဆိုတာလည္း နည္းပါတယ္ မထင္မွတ္ပဲ သူ႔အဖြားေနထိုင္ခဲ့တဲ့ ၿမိဳ႕ေလးကိုေျပာင္းေရႊ႔ေနထိုင္ခဲ့ရာမွ ထူးဆန္းတဲ့အရာေတြ စတင္ျဖစ္ေပၚလာပါေတာ့တယ္ အဲ့ဒါကေတာ့ ဝိညာဥ္ေတြကnatsumeကို တိုက္ခိုက္ၾကၿပီး သူမသိတဲ့ စာအုပ္ေလးတစ္ခုကို ၿခိမ္းေျခာက္ေတာင္းရမ္းလာၾကတာပဲျဖစ္ပါတယ္ အဲ့စာအုပ္ဟာ သူနဲ႔ဘယ္လိုပတ္သတ္မႈေတြ႐ွိေနမလဲ စာအုပ္ထဲမွာေ႐ာ ဘယ္လိုအေၾကာင္းအရာေတြပါမလဲ စတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကိုဆက္ၿပီးသိခ်င္ရင္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔အခုတင္ဆက္ေပးမယ့္ဒီseriesေလးကို ၾကည့္႐ႈအားေပးၾကပါလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ အမ်ိဴးအစားကေတာ့ Supernatural, Drama, Fantasyအမ်ိဴးအစားျဖစ္ၿပီး ၾကည့္႐ႈသူေတြ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကလိမ့္မယ့္လို႔ေမ်ွာ္လင့္ပါတယ္ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ တစ္ပတ္ကို ဗုဒၶဟူးေန႔ ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တိုင္းမွာ တစ္ပိုင္းစီတင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ ဒီ seriesေလးကို ဘာသာျပန္သူကေတာ့ Momoko Miyamiျဖစ္ၿပီး က်ေနာ္ Swam Yiမွ Encodeလုပ္ေပးထားတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ unicode Natsume ဘော်ဒါပေါင်းချူပ်စာအုပ် Takashi Natsumeဆိုတဲ့ကောင်လေးဟာ ငယ်စဉ်ကတည်းက ဝိညာဉ်လောကကို မြင်နိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါ တစ်နေ့တစ်နေ့ဒီဝိညာဉ်တွေနဲ့ပဲ အလုပ်ရှုပ်နေပြီး သူငယ်ချင်းဆိုတာလည်း နည်းပါတယ် မထင်မှတ်ပဲ သူ့အဖွားနေထိုင်ခဲ့တဲ့ မြို့လေးကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ရာမှ ထူးဆန်းတဲ့အရာတွေ စတင်ဖြစ်ပေါ်လာပါတော့တယ် အဲ့ဒါကတော့ ဝိညာဉ်တွေကnatsumeကို ...
Devils Line Devils Line မကောင်းဆိုးဝါးတွေဟာလူတွေကြားမှာမသိမသာရောနေနေကြတယ်။သူတို့အသက်ရှင်ဖို့ကလည်းသွေးကိုလိုအပ်တယ်။ဒါပေမယ့်သူတို့သွေးဆာခြင်းကိုထိန်းချုပ်မရတဲ့အချိန်၊သွေးမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့ဟာမကောင်းဆိုးဝါးအဖြစ်ပြန်ပြောင်းသွားရတယ်။ဆုကာဆာ တိုင်ယာဟာအသက်၂၂နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်သူလေးပါ။တစ်နေ့သူ့သူငယ်ချင်းနဲ့နှစ်ယောက်တည်းရှိတဲ့အချိန်မှာယူကီ အန်ဇန်ဆိုတဲ့လူတစ်ဝက်မကောင်းဆိုးဝါးတစ်ဝက်ဖြစ်နေတဲ့လူဟာသူ့သူငယ်ချင်းကိုရုတ်တရက်ဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။သူ့သူငယ်ချင်းကိုဖမ်းခဲ့တယ်။အမှန်တရားကိုသိရှိပြီးနောက်မှာတော့ဆုကာဆာဟာမကောင်းဆိုးဝါးတွေအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားလာခဲ့တယ်။အန်ဇန်ဟာဆုကာဆာရဲ့သွေးကိုမသောက်မိအောင်ထိန်းချုပ်ရင်းပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးကိုစိတ်ဝင်တစားတွေ့ရှိရမယ်animeမျိုးပါ။ Episode1 Episode2 Episode3 Episode4 Episode5 Episode6 Episode7 Episode8 Episode9 Episode10 Episode11 Episode12
Anti-Magic Academy: The 35th Test Platoon Overview Set inaworld where witches run havoc, the military decides to shift from using sword to utilizing guns to neutralize magical threats. The Anti-Magic Academy is an institution that specializes in training witch hunters. Takeru Kusunagi, who can’t use guns and continues to fight withasword, is relegated to the 35th Test Platoon,amotley group who can’t ...
TMDb: 8.5/10 22 votes
Brothers Conflict Ema Hinata ဆိုတဲ့ အထက်တန်းကျောင်းသူတစ်ယောက်ဟာ သူ့မိဘတွေရဲ့ လက်ထပ်လိုက်မှုကြောင့် သူ့မိထွေးရဲ့ အိမ်မှာသွားနေရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ သူ့မိထွေး သားဖြစ်သူက ၁၃ယောက်ကြီးတောင် ရှိနေခဲ့ပါတယ်။မိသားစုဘဝအမြဲလိုချင်ခဲ့တဲ့ Ema တစ်ယောက် ယောက်ျားတွေအများကြီးကြား ရောက်သွားတဲ့အခါမှာ ဘယ်လိုတွေ ဆက်ဖြစ်မလဲ ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။Otome gameလို အမျိုးအစားဖြစ်တာမလို့ Ikemenတွေလည်း အများကြီးပါတာဆိုတော့ မိန်းကလေးတွေ နှစ်သက်ကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။(Review by-Baka Otaku) MEGA Links Episode 1 Episode2Episode3Episode4Episode 5
Fairy Gone Fairy Gone Name --- Fairy gone フェアリーゴーン Episodes--- 24 Status--- Currently Airing Aired --- Apr 8, 2019 to ? Genres ---Action, Demons, Supernatural, Magic, Fantasy Duration --- 23 min ​ ဒီanimeအခြေခံတဲ့ကမ္ဘာမှာ Fairyတွေဟာ တိရိစ္ဆာန်တွေထဲဝင်နေပြီး တိရိစ္ဆာန်တွေဟာအထူးစွမ်းအင်တွေရရှိလာတယ်။ အဲ့ဒီFairyဝင်နေတဲ့တိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းတွေကို လူ့ကိုယ်မှာအစားထိုးရင် ထိုလူလည်းFairyကိုတစိတ်တပိုင်းဆင့်ခေါ်နိုင်ပြီးတော့ လက်နက်အနေနဲ့အသုံးပြုနိုင်တယ်။အဲ့လိုလူတွေကို Fairyစစ်သည်လို့ခေါ်ကြပြီးတော့ စစ်ပွဲတွေမှာအသုံးပြုလာခဲ့တယ်။ စစ်ပွဲကြီးပြီးသွားတဲ့အခါမှာ စစ်သည်တွေဟာ တချို့ကအစိုးရအတွက် တချို့ကမာဖီးယားတွေအတွက် တချို့ကသူပုန်တွေအတွက်အလုပ်လုပ်ပေးရင်း ကိုယ့်လမ်းကိုယ်ဖောက်လျှောက်ခဲ့ကြတယ်။ ဒီကားရဲ့MCဖြစ်တဲ့ Marlyaက fairyနဲ့ဆိုင်တဲ့ပြစ်မှုတွေ၊မတော်တဆမှုတွေကိုစုံစမ်းရတဲ့ အဖွဲ့အစည်းကြီးDorotheaရဲ့ အဖွဲ့ဝင်အသစ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကားမှာတော့ Fairyစစ်သည်တွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်တရားမျှတမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ပုံတွေကို တွေ့ရမှာဖြစ်လို့စောင့်ကြည့်ပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ် (P.S-ဒီနေရာမှာပြောချင်တာက Fairyဆိုတာ နတ်သမီး၊နတ်သူငယ်ကိုဆိုလိုချင်တာမဟုတ်ပဲ ကျတော်ထင်တာကတော့ အကောင်တစ်မျိုးမျိုးကိုပြောချင်တာနဲ့တူတယ် လက်ရှိတော့သေချာတော့မသိရသေးပါဘူး။နောက်အပိုင်းတွေမှာတော့သေချာပေါ်လာမယ်ထင်ရပါတယ်) #Reviewed by Aung Myat Min Season 1 Episode 1 http://bit.ly/2Umsxou Episode2http://bit.ly/2KKDVpV Episode3http://bit.ly/2Xvtk3q Episode4http://bit.ly/2LcHKEk Episode5http://bit.ly/302kY5r Episode ...
Tanaka-kun is Always Listless Name --- Tanaka-kun wa Itsumo Kedaruge Episodes --- 12 Status --- Finished Airing Aired --- April 9, 2016 to June 25, 2016 Genres --- Slice of Life, Comedy, School Duration --- 24 mins REVIEW ဒီကားလေးမှာဆိုရင်တော့ အထက်တန်းကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Tanakaက ဘယ်သူနဲ့မတူ တမူထူးခြားပြီး ပျင်းရိရတာကို အရမ်းနှစ်သက်သူဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်နေရာပဲရောက်နေရောက်နေ ရအောင် အိပ်ပြီး ဘာပဲလုပ်လုပ်ပျင်းရိနေတတ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့သူငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ Oota ကတော့ သူပျင်းတာကို သဘောကျပြီး သူ့ကို ဒုက္ခပေးမဲ့အရာကနေကာကွယ်ပေးတတ်ပြီး Tanaka အိပ်ပျော်နေရင်လည်း ချီပြီးသယ်သွားပေးတတ်တယ်။ဒီလိုရေးလို့ Blမထင်ပါနဲ့။ Comedy ပါ။Tanaka ဘယ်လောက်ပျင်းသလဲဆိုတာ ဒီ series ကို ကြည့်ရင် သိပါလိမ့်မယ်။ Episode 1 Episode2Episode3Episode ...
Kono Oto Tomare!: Sounds of Life (S2) Season 1 ရဲ့အဆက်ပါ Name --- Kono Oto Tomare!この音とまれ！ Episodes --- Unknown Status--- Currently Airing Genres--- Music, Drama, School, Shounen Duration--- 23 min Episode 1 Episode2Episode3Episode4Episode5Episode6Episode7Episode 8 Episode9Episode 10 Episode 11 Episode 12 Episode 13
Kono Oto Tomare!: Sounds of Life (S2)
Kono Oto Tomare!: Sounds of Life (S1) Kono Oto Tomare!この音とまれ！ Name --- Kono Oto Tomare!この音とまれ！ Episodes --- Unknown Status--- Currently Airing Aired--- Apr 7, 2019 to ? Genres--- Music, Drama, School, Shounen Duration--- 23 min ကဲ နောက်ထပ် ongoing ကောင်းလေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ Review ရွက်ဟောင်းတွေကြွေပြီးရွက်သစ်တွေဝေသလို အထက်တန်းကျောင်း ကြီးပြီးသွားတဲ့အခါမှာ ကလပ်စီနီယာ အကြီးတန်းတွေနေရာမှာ အငယ်ဂျူနီယာတွေအစားထိုးဝင်လာတာ မဆန်းပါဘူး။ ဒီကားရဲ့ MC ဖြစ်တဲ့ Takezou ဆိုတဲ့ဒုတိယနှစ်အထက်တန်းကျောင်းသားလေးဟာ Koto လို့ခေါ်တဲ့ ဂျပန်ရိုးရာစောင်းအသင်းမှာ တစ်ယောက်ထဲကျန်ခဲ့တဲ့ ဂျူနီယာအသင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အကြီးတန်းတွေကျောင်းပြီးသွားတာကြောင့် အသင်းဝင်တွေနည်းပါးသွားတာနဲ့အညီနဂိုကထဲကလူစိတ်ဝင်စားမှု့လည်းနည်းပါးတာကြောင့် Takezou ဟာပထမနှစ်ကျောင်းသားသစ်တွေထဲမှာ အသင်းသားအသစ်တွေကိုလိုက်လံစုဆောင်းရပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့တစ်ရက်မှာ ဘယ်နေရာကနေထွက်လာမှန်းမသိဘဲ ကျောင်းရဲ့လူမိုက်စာရင်းဝင်ကျောင်းသားသစ်တစ်ယောက်ဟာ အသင်းရဲ့စွန့်ပယ်ထားခံရတဲ့အခန်းထဲကိုဝင်လာပြီး အသင်းဝင်ချင်ပါတယ်လို့အတင်းတောင်းဆိုပါတယ်။ Takezou တစ်ယောက်အသင်းကို မပျက်သွားအောင်ဆက်လက်ထိန်းသွားနိုင်မလား?ကျောင်းသားသစ်နဲ့ကော အဆင်ပြေသွားမလားဆိုတာကိုတော့ page မှာဆက်လက်ကြည့်ရှုကြပါ။ #bk ep 01 ep 02 ep 03 ep 04 ep 05 ep 06 ep ...
Kono Oto Tomare!: Sounds of Life (S1)
Grimgar of Fantasy and Ash Grimgar of Fantasy and Ash (2016) 7.82 · MyAnimeList.net 7.6/10 · IMDb Episodes - 12 + OVA(List of episodes) Translator : Tatti Ko Ko Download Links!!!! Ep 1 : here Ep2: here Ep3: here Ep4: here Ep5: here Ep6: here EP7: here EP 8 : here EP9: here EP 10 : here EP 11 : here EP 12 : here
Attack on Titan IMDb 8.8/10 ရရှိထားတဲ့ ကမ္ဘာတဝှမ်းမှာလူကြိုက်များနေတဲ့Anime seriesကောင်းလေးတခုကိုမိတ်ဆတ်ပေးပါရစေ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တရာလောက်က Titanတွေရုတ်တရက်ပေါ်လာပြီးလူသားတွေကိုသတ်ဖြတ်စားသောက်ခဲ့ပါတယ် သူတို့ဘယ်ကနေရောက်လာလဲ သူတို့ကဘာတွေလဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိခဲ့ကြပါဘူး Titanတွေရန်ကကာကွယ်ဖို့လူသားတွေဟာ တံတိုင်းကြီးသုံးခုကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပြီး နှစ်ပေါင်းတရာကျော်တိုင် Titanတွေရန်ကနေကင်းဝေးခဲ့ပါတယ် ဒါပေမယ့် တနေ့မှာတော့သူတို့တခါမှမကြုံဖူးတဲ့ အလွန်ကြီးမားလှတဲ့Titanကြီးတကောင် ပေါ်လာချိန်မှာတော့.... IMDb 8.8/10 ရရွိထားတဲ့ ကမၻာတဝွမ္းမွာလူႀကိဳက္မ်ားေနတဲ့Anime seriesေကာင္းေလးတခုကိုမိတ္ဆတ္ေပးပါရေစ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္တရာေလာက္က Titanေတြ႐ုတ္တရက္ေပၚလာၿပီးလူသားေတြကိုသတ္ျဖတ္စားေသာက္ခဲ့ပါတယ္ သူတို႔ဘယ္ကေနေရာက္လာလဲ သူတို႔ကဘာေတြလဲဆိုတာဘယ္သူမွမသိခဲ့ၾကပါဘူး Titanေတြရန္ကကာကြယ္ဖို႔ လူသားေတြဟာ တံတိုင္းႀကီးသုံးခုကိုတည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ေပါင္းတရာေက်ာ္တိုင္ Titanေတြရန္ကေနကင္းေဝးခဲ့ပါတယ္ ဒါေပမယ့္ တေန႔မွာေတာ့သူတို႔တခါမွမၾကဳံဖူးတဲ့ အလြန္ႀကီးမားလွတဲ့Titanႀကီးတေကာင္ေပၚလာခ်ိန္မွာေတာ့.... SEASON 1 ATTACK ON TITAN O1 ATTACK ON TITAN O2 ATTACK ON TITAN O3 ATTACK ON TITAN O4 ATTACK ON TITAN O5 ATTACK ON TITAN O6 ATTACK ON TITAN O7 ATTACK ON TITAN O8 ATTACK ON TITAN O9 ATTACK ON TITAN 10 ATTACK ON TITAN 11 ATTACK ON TITAN 12 ATTACK ON TITAN 13 ATTACK ON TITAN 14 ATTACK ...
TMDb: 8.2/10 858 votes
One Week Friends Isshuukan Friends Genres: Slice of Life, Comedy, School, Shounen ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္း အသက္ ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္အရြယ္ Yuuki Hase တစ္ေယာက္ သူ႔ crush ေလးကိုသတၱိေမြးၿပီး သူ႔သူငယ္ခ်င္းျဖစ္ခ်င္ေၾကာင္း သြားဖြင့္ေျပာလိုက္တယ္။ တစ္ေယာက္တည္း တိတ္တဆိတ္သီးသန္႔ေနတတ္တဲ့ Kaori Fujimiya ဟာ လူအမ်ားကိုေရွာင္ဖယ္ကာ ျငင္းပယ္ခဲ့သလို သူ႔ကိုလဲလူပိုတစ္ေယာက္အျဖစ္ ျငင္းဆန္ခဲ့တယ္။ ေန႔လည္စာစားခ်ိန္မွာ Yuuki ဟာ ေန႔လည္စာအတူစားဖို႔ သူမေန႔လည္စာစားေနက် အမိုးထပ္မွာသြားသြားရွာတယ္။ ဒီလိုနဲ႔သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ အခ်ိန္ေတြအမ်ားႀကီးကုန္ဆုံးေစၿပီးတဲ့ေနာက္ သူမနဲ႔အရင္ကထက္ ရင္းႏွီးလာခဲ့တယ္။ သို႔ေသာ္လဲ ရက္သတၱပါတ္ကုန္ဆုံးခါနီးလာတဲ့အခါ သူ႔ကိုေရွာင္ဖယ္ေရွာင္ဖယ္ လုပ္လာေတာ့တယ္။ Kaori ကသူဒီလိုလုပ္ေနရတာကလဲ ရက္သတၱပါတ္ကုန္ဆုံးသြားတဲ့အခါ သူမရဲ့မိသားစုကလြဲလို႔ သူမနဲ႔နီးစပ္ခဲ့တဲ့သူေတြနဲ႔ပါတ္သက္တဲ့ အမွတ္တရေတြဟာ တနလၤာေန႔တိုင္း ေပ်ာက္ကြယ္ကုန္လို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သူ႔ကိုဖြင့္ေျပာခဲ့တယ္။ အလယ္တန္းတုန္းက ျဖစ္ခဲ့တဲ့မေတာ္တဆျဖစ္ရပ္တစ္ခုေၾကာင့္ တစ္ခါတုန္းကလူခ်စ္လူခင္ေပါမ်ားၿပီး ၾကင္နာတတ္တဲ့ Kaori ဟာ သူခ်စ္ခင္ရတဲ့သူေတြခံစားရမွာကိုေတြးၿပီး အခုဆိုသူငယ္ခ်င္းလက္ခံဖို႔ကို ေၾကာက္ရြံ့ေနခဲ့တယ္။ တစ္ပတ္ထက္မကတဲ့သူငယ္ခ်င္းျဖစ္လာဖို႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့တဲ့ Yuuki ဟာ ...
Dances with the Dragons ကျွန်တော်တို့ pg ကနေ တင်ဆက်မယ့်anime serieတစ်ခုကို မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ nameကတော့ Dance with the dragonsပါ ဒီကားက short serieဆိုပေမယ့် သူ့ရဲ့ ဇာတ်ကရှုပ်ပါတယ် ဘယ်လိုရှုပ်လဲဆိုတာတော့ အောက်မှာ review ရေးပေးထားပါတယ် Dance with the dragons =================== Total ep : 12 Genre : fantasy, Sci-fi, Action, Drama Studios : Seven Arcs Pictures MAL rating : 5.88 Age Rating : R - 17+ (violence & profanity) Seasons : 1 season Review anime nameအတိုင်း နဂါးတွေပါမယ် မှော်စွမ်းအားတွေပါမယ်ဆိုပေမယ့် ထင်သလိုမျိူးတော့ မဟုတ်ပါဘူး သိပ္ပံနည်းကျ တီထွင်ထားတဲ့လက်နက်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ကြတာပါ။ ရှေးခေတ်အခါတုန်းက နဂါးတွေဟာ မှော်စွမ်းအားတွေကို ပိုင်ဆိုင်ပြီးအန္တရာယ်များတဲ့ သတ္တဝါတွေပါ။ လူသားတွေဟာ Jushiki လို့ခေါ်တဲ့ physical ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲပြီး ဒြပ်ထုတွေကိုဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့ လက်နက်ကိုတီထွင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Jushikiဟာ လူသားတွေကို မှော်စွမ်းအားတွေ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ စွမ်းအားတွေကိုပေးပါတယ်။ ထိုလက်နက်ကြောင့်ပဲ နဂါးတွေဟာ ...
Fate Universe 15
MMANIME © 2020 All rights reserved Developed By MMANIME & Pain Organization